Ingabe isiraphu ye-maltitol sweetener iyingozi (e965) > Ukudla ngesifo sikashukela
Isifo Sikashukela Sisebenzisa Kanjani iMaltitol Sweetener
Sanibonani, bangani! Ukuze ngaso sonke isikhathi silondolozwe ushukela wegazi kanye nama-dessert ethu amnandi alawulwa, hhayi ukulimaza impilo yethu kanye nesibalo, izazi zokudla kanye nosokhemisi beze nezindlela eziningi zoshukela. Zonke zihlukile komunye nomunye ekwakhekeni, izinto ezisebenzayo kanye nemiphumela emzimbeni womuntu.
I-Maltitol noma i-maltitol iyi-sweetener ngaphansi kwenombolo yekhodi e965, sithola ukuthi yiziphi izinzuzo zayo futhi zilimaza ushukela, kanye nokuqukethwe kwayo kilojoule kanye ne-glycemic index.
Ekugcineni uzoqonda ukuthi kufanele udle ukudla okunoshukela nalesi sikhundla sikashukela.
Ungayithola kanjani i-maltitol sweetener
I-sweetener maltitol iqokwa embonini i-E 965 futhi iyinto yamakhemikhali, i-polyhydric alcohol eyakhiwe kusuka kushukela we-malt (i-maltose), yona, ekhiqizwa kusuka kummbila noma isitashi samazambane.
Ukukhiqizwa kwayo kwaqalwa ngonyaka wama-60 yinkampani yaseJapan. Kwakusezweni leRising Sun lapho inqubo yokukhiqiza yathuthukiswa futhi kwathathelwa imvume yayo.
Ukunambitheka kufana kakhulu ne-sucrose futhi cishe ayinazithunzi ezingeziwe.
IMaltitol ikhiqizwa ngezindlela eziningi: itholakala ngesimo se-syrup nangesimo se-powder. Kuzo zombili lezi zinto ayinamakha futhi inyibilika emanzini.
Inzuzo engenakuqhathaniswa ye-maltitol yikhono lokuyisebenzisa ekuphekeni, ngoba leli swidi alilahli impahla yalo lapho lifudumele futhi laziwa njengolawula ukushisa. Ngaphezu kwalokho, yena, njengoshukela, uyakwazi ukwenza i-caramelize. Lokhu kubaluleke kakhulu ekwenzeni ama-dragees nama-lollipops ekudleni ngokufakwa kwe-maltitol.
Kodwa ukwazi ngokweqiniso ukuthi kufanelekile yini ukusebenzisa le-sweetener ekudleni kwakho kwansuku zonke, sizothola ukuthi i-maltitol iyingozi kangakanani.
Ikhalori i-sweetener E 965
IMaltitol E 965 inobumnandi obuncane kunoshukela cishe ngo-25-30%, okungukuthi, ukwenza isiphuzo noma isiphuzo osidingayo ukufaka lesi sithelo esithe xaxa ingxenye yesithathu kunoshukela.
Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe yi-caloric ye-maltitol ngokuqhathaniswa nezinye izinambuzane eziningi kukhulu impela.
I-210 kcal nge-100 g, ephindwe izikhathi ezi-2 kuphela kunoshukela.
I-Maltitol: Inkomba ye-glycemic ne-insulin
Inkomba ye-glycemic (GI) ye-maltitol nayo inkulu impela futhi incike kwifomu lokukhululwa.
Ku-powder, i-GI isukela kumayunithi angama-25 kuye kwangama-35.
Kwisiraphu, i-GI isukela kumayunithi angama-50 kuye kwangama-56.
Kunoma ikuphi, kungaphansi koshukela, kepha kuphezulu kune-fructose.
Kodwa-ke, i-maltitol idonswa kancane, ngenxa yokuthi izinga likashukela egazini likhuphuka kancane kancane, hhayi ngokushesha, okubaluleke kakhulu kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2.
I-insulin nayo iyakhiqizwa, inkomba ye-insulin ingama-25. Ngakho-ke, udinga ukucabanga kaningi ngaphambi kokudla ukudla nge-maltitol. Impela, abantu abane-hyperinsulinemia abadingi ukwanda okukhulu kwe-insulin, futhi labo abasebenzisa i-insulin badinga ukubala ngokunembile umthamo futhi balondoloze ukubonakaliswa, ngoba amandla okunyusa ushukela wegazi azoba kancane kunalawo we-sucrose.
Kodwa-ke, kunoma yikuphi, kufanele kudliwe ngenani elilinganiselwe: abanesifo sikashukela kufanele abale umthamo wabo ngamunye nodokotela, futhi abantu abanempilo kufanele bakhumbule ukuthi ngobukhulu i-maltitol ine-laxative umphumela.
Futhi uma ushokoledi wesiguli ku-maltitol ungeke wedlule kakhulu ushukela, khona-ke umuntu onesifo sikashukela 1 le carbohydrate kumele anakwe futhi i-insulin idonswe kuyo, uma kungenjalo linda ushukela ophezulu emahoreni ambalwa. Futhi abantu abanesisindo esithe xaxa abadingi amakhalori awengeziwe.
Ngifuna ukuxwayisa ngokushesha ukuthi amashokholethi amaningi athengiswa ezitolo ezinkulu ezithi "Akukho Shukela" noma "NguStevia" ane-maltitol noma isomalt ekwakhiweni kwawo. Futhi kungaba yi-sorbitol noma i-xylitol noma ezinye zezinongo zokwenziwa.
Ngeshwa, kepha esikhathini esiningi okungekho ngaphansi kokubhala okuthi “nge-stevia” akukho lutho olungaphezu nje kokunyakaza okuphumelela kokuthengisa, okuthi wena, ngaphandle kokwazi, ukuthenge ngokuzithandela. I-sweetener efanelekile akufanele ikhuphule ushukela wakho wegazi kanye namazinga e-insulin!
Ukudla Kwansuku Zonke
Noma kunjalo, ayifanele ukweqisa isilinganiso sokusetshenziswa, konke ikakhulukazi ngenxa yezakhiwo zayo eziphakeme, imaltitol ingezwe emikhiqizweni eyahlukahlukene futhi ungahlangabezana nayo lapho ungalindi khona - sifunda ilebula ngokucophelela!
Isimo sansuku zonke singama-90 g ngosuku.
Isibonelo, e-United States, amanye amazwe ase-Europe, kanye ne-Australia, kumele kuxwayiswe isixwayiso ngezindawo ezixakile ze-maltitol.
I-Maltitol emithini LAPHO ushukela
Ngifuna ukudonsela ukunaka kwakho ekusebenzeni kwesiraphu ye-maltitol embonini yezemithi. Yonke imishanguzo, noma i-ketshezi, emathebulethini noma e-dragees, ekupakweni okubhalwe kuyo "NGAVULE ushukela", empeleni iqukethe i-sodium saccharin kanye / noma i-maltitol syrup kanye / noma isomalt.
Ngiyavuma ukuthi lokhu kungcono impela kunoshukela, kepha noma kunjalo kufanele wazi. Zonke isiraphu zemithi ezinambitheka kamnandi ziqukethe i-eyodwa noma enye i-sweetener. Isibonelo, i-panadol yengane noma i-nurofen. Ama-dragees ahlukahlukene kanye ne-lozenges, isibonelo, imifudlana engenashukela, futhi iqukethe i-maltitol noma enye i-sweetener.
IMaltitol ivunyelwe eYurophu kusukela ngo-1984, kanti namhlanje e-United States, Russia nakwamanye amazwe ambalwa. Kunoma yikuphi, ukuthenga i-sweetener Maltitol, ungakhohlwa ngomqondo wokulingana futhi uqiniseke ukuthi ufunda ngokucophelela ukwakheka kwemikhiqizo emalebula.
Kumele sinakekele impilo yethu njalo - khumbula lokhu futhi ube nempilo!
IMaltitol iyisakhi esiyi-polyhydric alcohol. Khiqizwa kushukela we-licorice. Imboni iqokelwe u-E965.
Inambitha njenge-sucrose, kepha ayinayo iphunga elithile. Kukhiqizwa ngesimo se-powder nesiraphu.
Izici zesengezo sokudla seMaltitol azishintshi lapho zifudumele, ngakho-ke kunezelwa empahleni ebhakwe nezitsha ezishisayo. Isiraphu ye-Maltitol ne-powder kungenzeka ku-caramelised. Kusetshenziselwa ukwenza uswidi.
Izinzuzo zesengezo sokudla:
Ingxenye enjalo, ngokungafani noshukela omhlophe ojwayelekile, ayibangeli ukubola kwamazinyo. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwesengezo akusithinti kabi isimo samazinyo. IMaltitol ayiphenduli ekwakhiweni kwamagciwane amancane ayingozi emgodini womlomo.
I-Sweetener idonswa kancane. Ngenxa yale mpahla, kunconyelwa ukuyisebenzisela ukuphazamiseka kwe-endocrine. Umuntu onesifo sikashukela weqa ushukela wegazi, ngakho-ke isengezo sithathwa njengephephile.
Okuqukethwe kwekhalori kwe-sweetener kungaphansi kwezikhathi ezimbili kunoshukela. Ayikhuphulisi ushukela ngokushesha futhi ayivuseleli ukukhuluphala. Ku-1 g kwesengezo ngu-2.1 kcal. Kuvunyelwe ukuthatha ngokukhuluphala, akusithinti isibalo.
I-E965 ayibonwa njenge-carbohydrate ekhanyayo, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo akuhambisani nokubekwa kwamafutha esibindini nasemisipha.
Ngenxa yalokhu okubambekayo, abanesifo sikashukela bangadla noma yimuphi amaswidi, ngisho noshokoledi.
I-Sweetener yenziwa ngamazambane noma ngesitashi sombila. Kwenziwe futhi ngesiraphu kashukela enokuqukethwe okuphezulu kwe-maltose.
Inkomba ye-glycemic E965 ku-powder - 25- 35 PIECES, in syrup - 50-55 PIECES.
Inkomba ye-insulin (AI) ibalulekile kwabanesifo sikashukela. Usebenzisa i-AI ukunquma isilinganiso esifanele somkhiqizo. Ilingana no-25.
I-BZHU ku-gr - 0: 0: 0.9. Ngakho-ke, iMaltitol iyasiza lapho isetshenziselwa ukulawula isisindo somzimba.
Ukusungulwa kwesifo sikashukela - vele uphuze nsuku zonke.
Sebenzisa isifo sikashukela
Isimo sansuku zonke sokusetshenziswa kukashukela singama-90 g ngosuku. Akunconyelwanga ivolumu enkulu, ngoba i-maltitol inomphumela we-laxative.
Faka kuma-khekhe, ama-cocktails, amaswidi namakhekhe. Kusetshenziswa ekwenziweni kwamavithamini wezingane, ama-lollipops ekwelapheni izifo zomphimbo.
I-Sweetener ilungele kakhulu ukwenziwa kwezinto zokudla kunokusebenzisa ekhaya. Kuvunyelwe ukufaka esikhundleni seMaltitol ngezithasiselo ezifanayo.
I-E965 akufanele idliwe unomphela, yize ivunyelwe ukwengezwa ekudleni kashukela. Kunokulimala okuncane okuvela kwisengezo sokudla okunempilo, kepha imiphumela emibi iyabhekelwa lapho ingezwa ekudleni.
Ukusetshenziswa kwamagremu angaphezu kuka-90 kuholela ekwakhiweni kwe-flatulence, uhudo. Inomphumela we-laxative, noma ngabe udliwe amagremu angama-50 ngosuku ubangela ezinye iziguli ngezihlalo ezikhululekile.
IMaltitol inenkomba ye-insulin ephezulu. Kukhombisa ukuthi ama-pancreas kumele akhiqize malini ngokuphendula iswidi.
Ngakho-ke, ngokukhuluphala, kunconywa ukuyisebenzisa ekuseni. Ngemuva kwamahora ama-2 osuku, kuyodingeka wenqabe ukuthatha i-sweetener, ukuze ungabangeli ukuhlukunyezwa okubukhali kwe-insulin.
Esikhundleni se-E965, kusetshenziswa amanye ama-sweeteners, enza into efanayo nomzimba.
I-Sucralose ithathwa njengomkhiqizo omnandi. Maltitol angasetshenziswa esikhundleni. I-Sucralose iswidi eliphansi lekhalori elivunyelwe ukukhuluphala.
Kusetshenziswa ngesikhathi sokukhulelwa nokuqunjelwa. It is contraindicated esimweni somdlavuza, isizinda esingama-hormonal esingazinzile.
I-cyclamate nayo isetshenziswa njenge-analog ye-Maltitol. Ama-supplement wokudla u-E952 amnandi kune-E965. Faka isicelo ngenani elilinganiselwe, ngoba iguqulwa iyingxenye enobuthi ye-cyclohexylamine. Ilungele ukungezwa eziphuzweni.
Isikhundla esihle yi-Aspartame. I-E951 iyingxenye yemithi, amavithamini ezingane neziphuzo zokudla. Ayikwazi ukusetshenziswa ezitsheni ngokuya ngokushisa. Lapho kufuthelana, isengezo siba yingozi. Kuvunyelwe ukungasebenzisi ngaphezu kwama-3 amagremu ngosuku.
Kukhona cishe akukho okuphikisana nokusetshenziswa kweMaltitol. Isengezo sokudla asinconyelwanga ukusabela komzimba, okubonakaliswa ngokuxhamazela, ukulunywa nokushisa, ubomvu, i-edema kaQuincke, noma ukushaqeka kwe-anaphylactic.
Izinzuzo zeMaltitol, ngokungafani nama-analogues, ziphakeme kakhulu. Ukungabikho kwe-contraindication kubuye kufakazele ukuthi ukwengeza kokudla kungenzeka ngesifo sikashukela. Noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi kufanele kuthathwe ngobuningi obunqunyelwe.
Isifo sikashukela sihlala siholela ezinkingeni ezibulalayo. Ushukela omningi ngokweqile uyingozi kakhulu.
I-Aronova S.M. wanikeza izincazelo ngempatho yesifo sikashukela. Funda ugcwele
Uyazisebenzisa yini izingqimba zamamitha kashukela
Ushukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa
Ungayithatha kanjani i-angiovit: okunqunyelwe
Izinsimbi zokulinganisa ushukela wegazi ngaphandle kokushaywa
I-Metformin Canon yabanesifo sikashukela seminyaka ehlukene
I-Torvacard: imiyalo esetshenziswayo nokuthi kungani iyadingeka, intengo, ukubuyekezwa, ama-analogues
Isifo sikashukela sikashukela sikashukela siyinkinga ebeka impilo ushukela ebangela isimo esingazi lutho. ...
I-Diabeteson MV 60 mg: imiyalo yokusebenzisa, intengo, izibuyekezo
ITroxevasin noma iTroxerutin - umehluko muni?
ImithiIsifo Sikashukela: Ulwazi olubalulekileAma-sweetenersIsifo sikashukela ezinganeni nasentsheniIzinkinga zesifo sikashukelaUkudla ngesifo sikashukelaAmamitha kashukela egaziUkwelashwa nokuvimbelaUmlenze uphuthuma, unyawo lwesifo sikashukelaImikhiqizo yabanesifo sikashukela
I-Diabetesulin izidakamizwa: imiyalelo yokusetshenziswa
I-Buttermilk Ice Cream
I-Apple Cider Vinegar Ukwelashwa kwesifo sikashukela
Izindlela zokuvimbela i-pancreatitis